Nucleus သည် NMDA receptor activation အားဖြင့်ကြွက်များတွင်လိင်မှုအတွေ့အကြုံနှင့်အညီ amphetamine Cross-sensitization နှင့် deltaFosB ဟူသောဖော်ပြချက်ကိုထိန်းညှိသည် (2015) - Your Brain On Porn
နျူကလိယ NMDA အဲဒီ receptor activation အထီးကြွက် (2015) တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကအောက်ပါစိတ်ကြွဆေးဝါးကပျတို-sensitive နှင့် deltaFosB စကားရပ်ကိုထိန်းညှိ accumbens
Neuropharmacology ။ 2015 စက်တင်ဘာ 21;101:154-164. doi: 10.1016/j.neuropharm.2015.09.023.
Beloate ln1, Weems PW1, ကာဇီထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း2, ဝက်ဘ်က IC2, Coolen LM3.
abstinence တဲ့ကာလအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်အထီးကြွက်များတွင်လိင်အတွေ့အကြုံကို Amph ၏အနိမ့်ဆေးများတစ်ခုတိုးလာ conditional ရာအရပျ preference ကို (CPP က) ကသက်သေ, D-ဖက်တမင်းဆေးပြား (Amph) ဆုလာဘ်ထိခိုက်မခံတဲ့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်. ထို့အပြင်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံ Amph ဆုလာဘ်လက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive အတွက်သော့ချက်အခန်းကဏ္ဍရာ deltaFosB ၏ induction, အပါအဝင်နျူကလိယ accumbens (NAc) အတွင်းအာရုံကြော plasticity, ဖြစ်ပေါ်သည်။
အဆိုပါ NMDA အဲဒီ receptor subunit NR1 လည်းမိတ်လိုက်နေဖြင့် upregulated, ဒါပေမယ့်လိင်အတွေ့အကြုံကို-သွေးဆောင်ဆိုးကျိုးများအတွက် NMDA receptors ၏ functional ဖြစ်စေဆီလျော်မှုမသိရသည်။
ဤတွင်ကျနော်တို့လိင်အတွေ့အကြုံကို-သွေးဆောင် NAc deltaFosB နှင့် cFos စကားရပ်အဖြစ် mating- အပေါ်အချင်းချင်းအပြန်အလှန် NAc MK 801 တာဟာနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးကြွက်များတွင် Amph-သွေးဆောင်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။
စမ်းသပ်မှု 1 မှာတော့ယောက်ျားမိတ်လိုက်သို့မဟုတ်ကိုင်တွယ်၏ 801 တစ်ခုချင်းစီရက်ဆက်တိုက်စဉ်အတွင်း NAc သို့ MK4သို့မဟုတ်ဆားလက်ခံရရှိပြီးနောက်ပိုင်းတွင် Amph ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီနှင့်အတွေ့အကြုံများ-သွေးဆောင် deltaFosB 10 နေ့ရက်ကာလအဘို့စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ကြသည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစဉ်အတွင်းအချင်းချင်းအပြန်အလှန် NAc MK 801 လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲ Amph ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီနှင့် NAc deltaFosB စကားရပ်အတွေ့အကြုံ-သွေးဆောင်တိုးတားဆီး။
စမ်းသပ်မှု2ခုနှစ်, မိတ်လိုက်-သွေးဆောင်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီအပေါ်အချင်းချင်းအပြန်အလှန် NAc MK 801 ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအေးစက်ရက်ကြိုတင်မိတ်လိုက်ရန် MK 801 သို့မဟုတ်ဆား၏အချင်းချင်းအပြန်အလှန် NAc ပြုတ်ရည်များကလေ့လာခဲ့ကြသည်။ အချင်းချင်းအပြန်အလှန် NAc MK 801 မိတ်လိုက်-သွေးဆောင် CPP ကမထိခိုက်ခဲ့ပါဘူး။
ယင်းနောက်မိတ်လိုက်-သွေးဆောင် cFos immunoreactivity အပေါ်အချင်းချင်းအပြန်အလှန် NAc MK 801 ၏သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ MK 801 NAc shell ကိုနှင့်အမာခံအတွက်မိတ်လိုက်-သွေးဆောင် cFos စကားရပ်တားဆီး။
အတူတူအဲဒီရလဒ်တွေကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစဉ်အတွင်း NAc NMDA အဲဒီ receptor activation Amph ဆုလာဘ်မှမိတ်လိုက်-သွေးဆောင် cFos နှင့် deltaFosB စကားရပ်နှင့်နောက်ဆက်တွဲအတွေ့အကြုံကို-သွေးဆောင်လက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive အတွက်သော့ချက်အခန်းကဏ္ဍကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုပေး။